भैंसीको दुध पिउनुका पाँच उत्कृष्ट फाइदाहरु !! | सुदुरपश्चिम खबर
भैंसीको दुध पिउनुका पाँच उत्कृष्ट फाइदाहरु !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : कार्तिक २०, २०७८ 115
गाईको दुधको तुलनामा भैंसीको दुधलाई सधैं कम स्वस्थवद्र्धक मानिन्छ । धेरैजसो मानिसहरुलाई गाईको दुध मात्रै फाइदाजनक हुन्छ भन्ने लाग्छ । जबकी यस्तो कुनै पनि हालतमा होइन । भैंसीका दुधका केही आफ्नै विशेष फाइदा छन् । हो, रोचक कुरा के हो भने, यसमा केही यस्ता भिटामिन र मिनरल्स पाइन्छन् जसले तपाईंको प्रतिरोधी क्षमतालाई बलियो गर्नेदेखि हड्डी, दाँत र छालाका थुप्रै रोगबाट जोगाउँछ । जस्तै कि प्रोटिन, क्याल्सियम, जिंक, भिटामिन ए र भिटामिन सी । यसबाहेक यसमा केही यस्ता एन्टिअक्सिडेन्ट पाइन्छन् जसले शरीरमा अक्सिडेटिव तनावलाई कम गर्छ र यसबाट हुने गम्भीर रोगबाट जोगाउँछ । भैंसीको दुध पिउनुका केही फाइदाबारे जानकारी लिऔं ।
भैंसीको दुधको न्यूट्रिशनल भ्यालू
सय एमएल भैंसीको दुधको न्यूट्रिशनल भ्यालू हेर्ने हो भने यसमा २३७ क्यालोरी हुन्छ । यसमा
– सबैभन्दा धेरै क्याल्सियम (१७.३ प्रतिशत) हुन्छ
– प्रोटिन (७.८ प्रतिशत)
– भिटामिन ए (४.३ प्रतिशत)
– पोटासियम र फस्फोरस
– एन्टीअक्सिडेन्टले भरपुर
भैंसीको दुध पिउनुका फाइदा
१. प्रोटिनले भरपुर छ भैंसीको दुधः
भैंसीको दुधमा प्रोटिनको राम्रो मात्रा पाइन्छ । यो प्रोटिनले सबैभन्दा पहिला त तपाईंको मांसपेशीलाई बढाउने र यसको विकासमा मद्दत गर्छ । यदि तपाईं बिहान भैंसीको दुध पिउनुहुन्छ भने तपाईंलाई लामो समयसम्म भोक लागेको महसुस हुँदैन । यस्तो यसकारण किनभने प्रोटिन पच्नमा सबैभन्दा धेरै समय लाग्छ जसले तपाईंको शरीरलाई लामो समयका लागि मेटाबोलिक प्रोसेसमा राख्ने गर्छ । साथै, यो प्रोटिनले खराब मांसपेशीको निर्माणमा पनि मद्दत गर्छ र यसलाई लामो समयसम्म स्वस्थ राख्छ । यसबाहेक हाम्रो शरीरले प्रोटिनको ठूलो मात्रालाई विभिन्न एन्जाइम र हर्मोनलाई सन्तुलित राख्नका लागि गर्दछ ।
२. तौल बढाउन सहयोगीः
तौत बढोस् भन्ने चाहना भएका मानिसहरुका लागि भैंसीको दुध निकै फाइदाजनक हुन्छ । यस्तो यसकारण कि यसमा क्यालोरीको मात्रा निकै धेरै हुन्छ र यसले तीब्र रुपमा तपाईंको शरीरको ऊर्जा पनि बढाउँछ । साथै, भैंसीको दुधमा फ्याटको मात्रा असाध्यै हुन्छ र यसले दुब्लो पातलो मान्छेलाई मोटाउन मद्दत गर्छ ।
३. मुटुलाई स्वस्थ राख्छः
मुटुलाई स्वस्थ राख्नका लागि भैंसीको दुध फाइदाजनक हुन्छ । यसको सबैभन्दा खास कुरा के हो भने यसमा कोलेस्ट्रोलको मात्रा निकै कम हुन्छ जसले लामो समयसम्म तपाईंको रक्तनलीलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । यसले शरीरको रक्तसञ्चारलाई राम्रो बनाउँछ र उच्च रक्तचापको जोखिम कम हुन्छ । साथै, जो मानिसहरु उच्च रक्तचापद्वारा पीडित छन् उनीहरुका लागि पनि भैंसीको दुध पिउनु फाइदाजनक हुन्छ । यसमा पोटासियमको मात्रा पनि उच्च हुन्छ जुन सन्तुलित रक्तचापका लागि निकै आवश्यक छ । वास्तवमा, पोटासियमले एउटा वेसोडिलेटरको रुपमा काम गर्छ जसले रक्तनली र धमनीलाई चौडा गर्छ र रक्त सञ्चारलाई सहज बनाउँछ । यसरी हामी मुटु रोगबाट बच्न सक्छौं ।
४. हड्डी बलियो बनाउँछः
भैंसीको दुधमा क्याल्सियमको मात्रा निकै राम्रो हुन्छ जुन हड्डीको विकासका लागि आवश्यक मिनरल मानिन्छ । साथै यसमा केही विशेष पेप्टाइड्स पनि हुन्छ जसले हड्डीको स्वास्थ्यलाई बढाउने गर्छ र अस्टियोपोरोसिसजस्तो रोगबाट बच्न मद्दत गर्छ । साथै, बढ्दो उमेरसँगै कमजोर हड्डीलाई पनि मजबुती दिन्छ । यसले बोन मास बढाउन पनि मद्दत गर्छ । साथै, यसमा पाइने अन्य खनिज जस्तै कपर, म्यागनिज, फस्फरोस र जिंकले पनि हड्डी बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।
५. रक्तअल्पत्ताबाट जोगाउँछः
रगतको कमी हुँदा रक्तअल्पत्ता हुन्छ । यस्तोमा यो आवश्यक छ कि तपाईं भरपुर मात्रामा आइरनको सेवन गर्नुहोस् । भैंसीको दुधमा आइरन पर्याप्त मात्रामा पाइन्छ । यसले रातो रक्त कोसिकालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । साथै यसले शरीरमा आरबीसीको संख्या बढाएर शरीरकाम विभिन्न अंगमा अक्सिजनको स्तर बढाउँछ जसकारण यसले पूरा क्षमतासहित काम गर्ने गर्छ । यसबाहेक यसले नयाँ सेल्स र टिस्यूको उपचार र विकासलाई पनि गति दिन्छ ।
गाईको दुधको तुलनामा भैंसीको दुधमा सोडियम पनि कम हुन्छ । साथै, यसका केही विशेष एन्टीअक्सिडेन्टले खतरनाक मुक्त कण र विषाक्त पदार्थलाई शरीरबाट सफा गर्न सक्छ जुन पुरानो रोगको कारण बन्न सक्छ । त्यसकारण प्रतिरोधी क्षमता बढाउन र रोगबाट बच्नका लागि भैंसीको दुध पिउन सकिन्छ । रातोपाटी बाट सभार
यी ७ कमजोरीहरु, जसले कमी ल्याउँछ मान्छेको स्टामिनामा !!
कोरोना विरुद्धको दुई करोड खोपको मात्रा मौज्दात छ : स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा
हेर्नुहोस् आज शनिबारको राशिफल !!
यसरी मलको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ केराको बोक्रालाई !!
कसरी घरमा बाह्रैमास ढकमक्क फूलहरु फूलाउने ?
दश वर्षदखि अँध्यारो गोठमा कैद गरिएकी बैतडीकी शान्ति सुनी
बैतडी : सडकमाथिबाट खसेको पहिरोले जिपमा क्षति पुग्यो
ट्याक्टरबाट खसेर डडेल्धुरामा एकजनाको मृत्यु
सुदूरपश्चिम लगायत देशका पाँच प्रदेशमा भारी हिमपातको सम्भावना
आज साताको चौथो दिन (बुधबार) झन् घट्यो सुनको भाउ, हेर्नुहोस् तोलाको कति…
YouTube 58K Subscribers